တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဖောင်တိန်လေးရဲ့ အစနဲ့အဆုံး
Posted by မေဓာဝီ at 4:51 PM
အင်း...ဒီတခါတော့ ဖောင်တိန်ရှိလျက် အရေးခက်၏...ဖြစ်နေပြီ။
ဖောင်တိန်ကလေးနဲ့ ရေးတဲ့စာစုတွေ မကြာခင် ပြန်မြင်ရစေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဒီဘလော့ဂ်ကလေးကိုတော့ ဖွင့်ထားပါဦး။ ကျနော် ကိုပြူးကျယ်သို့ပေးစားများကို ဖတ်ချင်လို့ပါ။
7/12/2008 2:06 AM
ဖောင်တိန်က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။
wisdom သုံးခွင့်မရရင် cross သုံးလဲ ရပါတယ်။
အဓိက က အဓိကပဲ။
မင်းအဖေ ပြောသားပဲ .. use your wisdom!
ပို့စ်အသစ်ပြန်တင်လာလို့ ၀မ်းသာရပေမယ့် စာအသွားအလာကို ကြည့်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်။ ဖောင်တိန်ဆိုတာ အိတ်ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားရတဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ မမေ...။ လက်ညောင်းလို့၊ ဒါမှမဟုတ် မင်မရှိသေးလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေအရ တခဏ နားရတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တာ မဟုတ်လား။
စာမြင်လို့ ၀မ်းသာအားရ ဖတ်လိုက်တာ...
အမ စာ ပြန်မရေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းရေးထားတာကိုး...
အမ.. အိမ်နဲ့ သေချာပြန်ညှိကြည့်ပါလား အမရ။
စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို အမပေးတဲ့ အတွေးအခေါ် အရေးအသားတွေက အရမ်းကို အကျိုးရှိတဲ့ အတွက်
အဲဒီဖောင်တိန်လေးနဲ့ အမရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို တနေ့တော့ အမတို့အိမ်က နားလည် လာမှာပါ။
အမစာတွေကို ကြိုက်လို့ ..
ပြန်လာပြီကိုး။ ကောင်းလျင့်တည်း။ ၀ဲလ်ကမ်းဘက်။း)
ကျေးဇူးရှင် မိခင် ဖခင်နဲ့တကွ ဦးလေး အဒေါ် မောင်နှမများအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒကို သူ့လို လေလွင့် ရွက်ဝါ တရွက်က ဘယ်လိုလွန်ဆန် နိုင်မှာလဲ ... ။
ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ပိုင်ပါတယ်။ တရားသဘောအရ တယောက်ထဲလာပြီး တယောက်ထဲပဲ ပြန်သွားရပါတယ် ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။
7/15/2008 12:43 PM
မေရေ… postအစက မေ့လက်ရာမှာ မေ့မျောလို့ … လုံးဝ မရိပ်မိပဲ… postအဆုံးမှာ တကယ် ရက်စက်စွာ ခွဲရက်ပြီပေါ့… ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကျေးဇူးဆပ်တာမို့တိတ်တိတ်သာ ကြေကွဲတော့မယ်လေ… တို့ ကတော့ ဖောင်တိန် အဟောင်းလေးဖြစ်ဖြစ် အသစ်လေးဖြစ်ဖြစ် မေလက်ရာဆို နှစ်သက်စမြဲမို့မေ့ခြေရာတွေ ရှာဖွေနေဦးမှာပါ… မေ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာပါစေ….
Ma May, thanks for coming back to your supporters after long long time, your brothers and sisters all around the world. I am happy to see you here again. I would like to tell you what i feel on your this very new post so i mailed this message to you here. I can catch what you mean i think so i understand u but i feel something on your post title, " Beginning and End of the pen". Actually this post is not End of your post i think, so let me know what is your idea? Is this the end of your post? You ended your post by saying good bye to all your friends, and supporters. So i fell this post is not the last one, then why you say so. Anyway i want you to walk on your right platform . Thanks. Aung Khai.( Maung Khai)
7/19/2008 10:03 AM
eleven web ကိုဝင်ကြည့်ရင်းက
ညီမနဲ့ blog name ချင်းတူနေလို့ပါ။
8/07/2008 6:34 AM
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါရောက်တဲ့အခါ ဘူးထဲကထွက်လာမယ့် မမေရဲ.ဖောင်တိန်ကလေးကို စောင့်မျှော်နေမယ်နော်...
8/09/2008 9:43 AM
I am very sorry foramuted nib asanew reader for the first time.I think ,I have no chance to read from you who can express your feeling without knowing some of the clues.If your Pen recover,pls press it http://irrawaddy.burmabloggers.net
BBFN.....Thank you Mis Doe
8/23/2008 12:38 AM
စစရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ခုလိုမျိုး အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မမေမရေးတာ ခဏနားထားပေမယ်လို့ တကယ်တော့ မမေစာတွေဆက်ရေးနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာချက်မှာ စပြီးခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ့် အချိန် မေဓာဝီ ခေမာသီ ဝေဘာဂီဆိုပြီး နောက်ပြောင်ပြီးသိခွင့်ရခဲ့တယ့် အချိန်ကနေ အပိန်အပဲ့လို အချိန်မျိုးကနေ ခုလိုချိန်ထိ မမေတစ်ယောက်ကို သတိရမိပါတယ်။ မမေလဲ ရောက်ရာအရပ်မှာ အဆင်ပြေပါစေ။
တစ်လက်စတည်း မွေးနေ့အတွက်ပါဆုတောင်းပေးပါတယ် မမေ။
မမေရေ အစ်မစာတွေဆက်ရေးမယ်လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ့် မမေကို အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
8/23/2008 9:44 AM
မေရေ… စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါသော မွေးနေ့ ပေါင်း ရာထောင်သောင်း တိုင်ပါစေ… လွမ်းလျက်…
8/23/2008 5:43 PM
လာမယ့် စက်တင်ဘာ (၅) ရက်နေ့ဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းများနေ့ပါ။ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည် ခွပ်ဒေါင်းရဲဘော်တွေအကြောင်းအပါအ၀င် မြို့ပြ၊ ကျေးလက် တိုက်ပွဲများအကြောင်းရေးသားခဲ့ကြတဲ့ သံခဲ (ဆေး/ မန်း)၊ ကိုတိုက်မောင်း။ ကိုထက်မိုး၊ ကမာပုလဲ၊ မြင့်ဇေ၊ ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး)၊ တမာခင်၊ ကိုဈာန်၊ ငြိမ်းစု၊ သားချစ်/ဟစ်တိုင် ... တို့ရဲ့ စာ၊ ကဗျာများအား ဖေါ်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း .....
တလှမ်းချင်း တလှမ်းချင်း ...
ဟိုးးးးးးးးး နောက်မှာ ကျန်ရစ် ...
တနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပကော ... ။
မိဘနှစ်ပါးကို ခွဲခွါ ...
သောကတွေနဲ့ မောလျရတဲ့ ညပေါင်းများစွာ
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုလား ....
ဆက် လက် လျှောက် လှမ်း
ပန်း တိုင် ဆီ သို့ ...
ဦးတည်လို့ ... ။ ... ။
ဒီနေရာမှာ http://symposium.22web.net သွားတင်ထားတယ်။ပါမစ်တောင်းတာပါမေဓါဝီရေ့...
မဟန ဖက်မှာတွေ့လို့ လာဖတ်တာပါ..
Actually I can understand your family's demand but how could you stand your own demand? Demand of Wisdom is notabearable force. For me, I may use every chance I get to apply my Wisdom. I wish I could THINK, WRITE and DISCUSS in freedom. So, I tried not to think I'm bounded with anything. Anyway, it's your choice. We value your privacy. But we wish you'll be back with your Wisdom, as soon as possible. Thanks for your shared thoughts.
11/10/2008 2:16 AM
I just miss you and thought of droppingaline or two.
Wish you all the best and hope that you'll be back to this bloggers' world.
p.s. I don't have burmese font here.
အော်...မဖတ်မိတာတောင် ကြာခဲ့ပြီဘဲ...ကျွန်တော့် အီးမေးလ်ထဲဝင်လာတော့မှပဲ ပြန်သတိထားမိတယ်...ကျွန်တော်တို့က တော့ အပေါ်ကတစ်ယောက်ပြောသလိုပါပဲ..ဖေါင်တိန်ရှိလျှက် အရေးခက်နေတဲ့ အမျိုးအစားထဲ ပါနေတယ်လို့ပဲ ဆိုပါရစေဗျာ..ကျွန်တော် အင်တာနက်စတင် အသုံးချစက တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မမေဓါဝီရဲ့ ဘလော့ကလေးကို ဒီနေ့အထိ နှစ်သက်နေမိဆဲပါပဲဗျာ...mr.htaykyaw@gmail.com
2/06/2009 3:15 AM
ဦးနှောက်ရှိနေလို့တွေးလိုက်တိုင်း ဘဝကို ခါး သက်မိတယ် .... နှလုံးသားရှိလို့ ခံစားမိတိုင်း တအားစူးပြီးနာကျင်မိတယ် ..... ကံဆရာ အလှည့်မှာ လူးလှိမ့်နေအောင်ခံစားနေရတာက ပိတ်ကားနောက်ကွယ်မှာ ..... ကနေရတာက အသောခန်း.... တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ငိုနေရ တယ် ....
9/24/2009 9:47 PM
အမြော်အမြင်ရှိသူတယောက်ဟာ အခါအခွင့် မသင့်သေးရင် မျက်စိရှိလျက် အကန်းလို နေရတယ် ... နားရှိလျက်နဲ့ အပင်းလိုနေရတယ် ... ပါးစပ်ရှိလျက်နဲ့ အအ'လို နေရတယ် ... အခုအချိန်မှာ သမီးဖောင်တိန်လေးကို သုံးရမယ့် အချိန် မဟုတ်သေးဘူး။ သမီးကို မရေးနဲ့လို့ အဖေ မပြောပါဘူး ... သမီးရေးချင်တာတွေကို တခြားဖောင်တိန်တွေနဲ့ ရေးပေါ့ ...။ အဖေပြောတာ နားလည်လားသမီး ... '